06B အား အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း MADI ဟု အမည်ပေးပြီ « MMWeather Information BLOG
« မုန်တိုင်း “မဒီ” (MADI-06B) ရန်မှ မြန်မာပြည်လွတ်ပြီ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းမှ 92B မုန်တိုင်း 06B ဖြစ်လာပြီ »
06B အား အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း MADI ဟု အမည်ပေးပြီ
By mmweather.ygn, on December 7th, 2013
ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတွင် နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း 06B အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည် MADI ဟု ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ (ပုံ-၁)
MADI သည် မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချင်နိုင်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၃၂ဝ ခန့်၊ ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ်၏ အနောက်တောင်ဘက် ၆၃၅ မိုင်ခန့်၊ စစ်တွေမြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၈၃၅ မိုင်ခန့် ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး၊ လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၉ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသည့် GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်အရ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၉း၃ဝ နာရီတွင် ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 70 knots(80.55 mph) အထိ မြင့်မားလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ စတင်၍ ချိုးကွေ့နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် မြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၅း၃ဝ နာရီတွင် ရွေ့လျားမှုကျဆင်းကာဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အနောက်တောင်ဘက်သို့ ပြန်လည်ချိုးကွေ့၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချင်နိုင်းမြို့အရှေ့ဘက် မိုင် ၁၉ဝ ခန့်သို့ ရောက်ရှိ ဗဟိုပြုနေမည်ဟု ကြိုတင် ပုံဖေါ်ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက် ညပိုင်းတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီလ်နာဒူးပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် သီရိလင်္ကာကျွန်းမြောက်ပိုင်းအား ဖြတ်ကျော်၍ အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ (ပုံ-၂)
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်၌ မုန်တိုင်း MADI သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသို့ ချဉ်းကပ်ဖြတ်ကျော်စဉ် ပုသိမ်မြို့ အနောက်ဘက် မိုင်၁၅ဝ ခန့် ပင်လယ်ပြင်တွင် အားအသင့်အတင့်ရှိသည့် လက်ဝဲရစ်လေဝဲတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေမှလွဲ၍ အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း MADI(06B)သည် မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်မည့် ရာနှုန်းအလွန်နည်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်မည့် အခြေအနေအား ဆက်လက်စောင့်ကြည့်၍တင်ပြပေးသွားပါမည်။
Tropical Cyclone MADI(06B)
07 Dec 2013 1200Z
Location: 11.0 84.5
Uncategorized « မုန်တိုင်း “မဒီ” (MADI-06B) ရန်မှ မြန်မာပြည်လွတ်ပြီ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းမှ 92B မုန်တိုင်း 06B ဖြစ်လာပြီ »
2 comments to 06B အား အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း MADI ဟု အမည်ပေးပြီ
Log in to Reply	ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတွင် တွေ့ရသော အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း MADI(06B) ..
ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အဆင့်-၁(CAT-1)အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အားအကောင်းဆုံး အခြေအနေ(ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 75 knots to 90 knots – 86.31 mph to 103.57 mph)အထိ ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း JTWC မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
Log in to Reply	TEXT QUOTE FROM JTWC WARNING 11
THE TOTAL PRECIPITABLE WATER ANIMATION DEPICTS DRY AIR ENTRAINMENT INTO THE SOUTHERN PERIPHERY OF THE LLCC.
INCREASING VWS ASSOCIATED WITH STRENGTHENING
UPPER-LEVEL WESTERLY FLOW IS FORECAST TO BEGIN WEAKENING THE SYSTEM AFTER TAU 12.
TC 06B WILL CONTINUE TO WEAKEN THROUGH THE REMAINDER OF THE FORECAST PERIOD DUE TO PERSISTENT VWS, DRY AIR ENTRAINMENT AND POSSIBLY COOLER SST ASSOCIATED WITH COLD UPWELLING.
TC 06B IS FORECAST TO DISSIPATE OVER WATER BY TAU 96.
လာမည့် ၉၆ နာရီ(ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် ၁၈း၃ဝ နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် ပင်လယ်ပြင်၌ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်သို့ လျော့ကျပြီး တဖြည်းဖြည်း အားပျော့ပျက်ပြယ်သွားမည်)
« မုန်တိုင်း “မဒီ” (MADI-06B) ရန်မှ မြန်မာပြည်လွတ်ပြီ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းမှ 92B မုန်တိုင်း 06B ဖြစ်လာပြီ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum